Creative Writing » ကျွန်ုပ်၏ အမှတ်တရ ကဗျာများ – ၁၂ (အီကြာကွေးအား တို့ထိမိခြင်း)	17
Ma Ma says: အီကြာကွေးလို့ပြောရင် နောက်မယား ဆိုတဲ့ စာကို သွားသတိရတယ်။
Courage says: ဆရာ့ရဲ့ ဟာသတွေကတော့ အခုထိအောင် အမှတ်ရနေစဲပါပဲ
Mike says: .ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်က စောင့်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာကြီးဂုရုကွေး စာတွေအမှတ်ရမိတယ်…
.ရှာဖွေတင်ပြပေးတာကျေးဇူးပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: ဟုတ်ကဲ့။ အားပေးသွားတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ လေးမိုက်။
Mr. MarGa says: အသက်သုံးထောင် ဂုရုကွေးပေကိုး… သွပ်သွပ်သွပ်
Courage says: ဟုတ်ပါရဲ့။ သောကြာစာစောင်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ စာဖတ်ရှိန်ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ စာဆောင်လို့တောင် ပြောရမလိုပါပဲ လေးမာဃရေ့။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အဲဒီကဗျာလေးကို တစ်ပိုင်းတစ်စသိတယ်.. နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကို ပိုအမှတ်ရနေတာ.. အပြည့်အစုံရယ်.. ဆရာအီကြာကွေးရေးခဲ့တယ်ဆိုတာရယ်ကို ခုမှ သိရတာပါ….. အနော်က သောကြာပရိသတ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: “ယောက်ျားဟေ့နော်
ခင်ဇော် says: ကဗျာချည်းသာဖတ်မိရင် ဆရာ ဓနုဖြူ ကျော်ထွန်း နဲ့ တွဲမိမယ် မထင်ဘူးးးး
Courage says: ဟုတ် ကျွန်တော်ကလဲ ကျေးဇူးပါ
Alinn Z says: အဲ့ဒီဆရာကြီး ကလောင်နာမည်ကို ကြားတိုင်း…လူမမြင်ပဲ…အီကြာကွေးကြီး ပြေးပြေးမြင်….
ကိုယ်တောင် ကိုယ့်ကလောင်နာမည်ကို နံပြားတို့ စမူဆာတို့ ပဲပလာတာ တို့ ပေးလိုက်ရ ကောင်းမလား တွေးမိ…. ဒါမယ့် ရွှေအမြုတေတိုက်က ဦးဝင်းငြိမ်း ကျနော့်ကို ပြောဖူးတယ်။
ကျနော့် ကလောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “သူငယ်ချင်း”ဆိုတာကို ရည်ရွယ်ပြီး ကျနော့်အား…..ပြောခဲ့တာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: နာမည်ဆိုတာ ပညက်တစ်ခုအဖြစ်ပဲ သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ လူတော်တော်များများဆီမှာ ကဗျာဆန်ဆန် နာမည်လေးတွေရှိနေမှာပါ။
မြစပဲရိုး says: ဆရာကြီး အီကြာကွေး ရဲ့ စာ တွေ က တော့ ကိုယ့် အကြိုက် တွေထဲ မှာ ရှေ့ဆုံးက ပါပါတယ်။
Courage says: ဟုတ်ပါ့ ဒေါ်လေးမြရယ်။
black chaw says: ဆရာကြီးအီကြာကွေး စာတွေ အများကြီးဖတ်ဖူးပါတယ်…။
Courage says: ဆရာကြီးရဲ့ ဟောပြောပွဲတစ်ပွဲတော့ နားထောင်ဖူးတယ်ဗျ။
အောင် မိုးသူ says: ဆရာအီကြာကွေး စာတွေကိုတော့ အနည်းငယ်သာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မထိတွေ့မိခဲ့တာလည်း ပါတာပေါ့နော်။